Browser ကိုတိုးချဲ့ | October 2019
အဓိက Browser ကိုတိုးချဲ့
ကျောင်းကနေဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် Google Chrome ၏ extension ကို - OK ကိုအသံချွေတာ
တစ်ခါတစ်ရံသင်အကြိုက်ဆုံးလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်ဂီတကိုနားထောင်၏မျှသာဖြစ်နိုင်ခြေအလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအတန်းဖော်နဲ့ဂီတလမ်းကြောင်းကို download လုပ်ပါဖို့မလိုဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, OK ကိုကယျတငျအသံအမည်ရှိအတန်းဖော်နှင့်အတူပေါ်ပြူလာဂီတဒေါင်းလုပ်များအတွက် Google Chrome ဘရောက်ဇာများအတွက်အခမဲ့ extension ကိုလည်းမရှိ။
Savefrom.net: VC ကိုထံမှအသံဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် browser ကို-based အဖြည့်
Savefrom.net - သင်ရေပန်းစားသောဗီဒီယိုခွဲဝေမှုအနေဖြင့်ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုမယ့်ပေါ်ပြူလာအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု။ သငျသညျထို site တိကျတဲ့ browser ကို-based extension ကိုဝန်ဆောင်မှုလူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက် Vkontakte ကနေ download, စံချိန်ခွင့်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သောသိပါသလား ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကနေအဆင်ပြေဂီတဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, သူကရိုးရှင်းများအပြင် Savefrom တည်ထောင်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
VKSaver: အစာရှောင်တင်အသံနှင့်ဗီဒီယို archive ကို!
သငျသညျ Vkontakte ထံမှဂီတကို download လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ်? ပိုမိုလွယ်ကူအဘယ်အရာမျှမရှိပါ! bit သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးပုဒ်ရုံနှစျခုကလစ်မဆိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့သင့်ကို browser ထားကြ၏။ ထိုအခါ VC ကို Seiver ၏ဤဘရောက်ဇာကို-based extension ကိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ VKSaver ဖြစ်ပါတယ်။ add-ons တွေကို install လုပ်ပါနှင့်ဆိုက် Vkontakte သွားခြင်းအားဖြင့်သင့်ကို Web browser ကို restart လုပ်ပါပြီးနောက်နီးပါးတိုင်းစံချိန်တစ်ခုကိုနံရံတစ်ခုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အသံစာရင်းထဲတွင်ရှိမရှိ, တစ်ဦးကို download button ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge များအတွက်အသုံးဝင်သော extension များ
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge များတွင်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားလူကြိုက်များ browser များ, Extension ဖြည့်စွက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၌တည်၏။ သူတို့ထဲကတချို့ကတစ်ဦးက Web Browser ကိုအသုံးပြုပါအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် installed နေကြသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge များအတွက်အကောင်းဆုံး extension များယနေ့က Windows Store ကို Edge 30 extension များရရှိနိုင်ပါသည်။
VkButton - လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်အလုပ်လုပ် browser ကို-based extension ကို
ဝန်ဆောင်မှု VKontakte လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုရေးရုရှားတွင်ကွန်ရက်နှင့်အများဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာသွားရောက်ခဲ့ပြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာဤဝက်ဘ်သယံဇာတပေါ်ဝေစုဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဂီတ communicate ။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူ interface နဲ့ဒီလူကြိုက်များတဲ့လူမှုကွန်ယက်၏ features တွေတိုးတက်လာဖို့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုရှိပါတယ်။
VKontakte များအတွက် VKfox plugin ကို
VKontakte များအတွက် VKfox plugin ကိုမဆိုခေတ်သစ်ဘရောက်ဇာတစ်ခု Third-party extension ကိုဖြစ်ပြီး, tools တွေအမျိုးမျိုးပေးသိသိသာသာ site ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖြည့်စွက်ပေး features တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ဆောင်းပါး၌တည်၏။ ပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ဦး extension ကိုတစ်ချိန်တည်းဆိုက်မှာလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲ, လူမှုရေးကွန်ရက် features တွေသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်များကိုရည်ရွယ်နေသည်ဟုယူဆ။
Adblock Plus ကို
Advertising ကြော်ငြာ - ထိုမော်တာကုန်သွယ်ရေး, ဒါပေမယ့်မကြာခဏကြော်ငြာရှင်များဒါကြောင့် overdoing, ထိုခရီးစဉ်ကိုနီးပါးဆိုကို web အရင်းအမြစ်များကိုခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာ blocker အဖြစ် tool ကိုသုံးပြီး, သင်က၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောသရုပ်အတွက်ကြော်ငြာဘာအကြောင်းကိုမေ့လျော့နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Adblock Plus အား - ထိုကြောင့်, ဤဆောင်းပါးကိုငါတို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးဘရောက်ဇာကို blocker အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
VKontakte VKLife ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေ
VKontakte စိတ်ချလက်ချယင်း၏အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေဘို့ features တွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော်လူမှုရေးကွန်ရက်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ခါတစ်ရံဒီတော့လိုအပ်သောနေသောဂုဏ်သတ္တိများ, အချို့မရှိပါ။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်နှင့် player ရန်လွယ်ကူ access ကိုမြန်ဆန် browsing နဲ့အွန်လိုင်းယခုဖြစ်သောသူငယ်ချင်းနှင့်အတူ chat နိုင်ဘူး။
Oktools - ကျောင်းကနေဂီတဒေါင်းလုပ်များအတွက်အခမဲ့ extension ကို
သင်တစ်ဦးလူမှုကွန်ယက် Odnoklassniki သုံးပါနှင့်ထွက်အဲဒီမှာသီချင်းနားထောင်ပျော်မွေ့လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းတစ်ချိန်ကသင့်ကွန်ပျူတာသို့သီချင်းတွေကိုဒေါင်းလုပ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားကြပြီမဟုတ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုသူ့ဟာသူဆိုက်ကနေဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုမထားဘူးသော်လည်း, သင်သည်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များမှတဆင့်ဒီချို့တဲ့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်။ Oktuls - သင်တဦးတည်းကလစ်အတွက် site ကိုအတန်းဖော်များမှစံချိန်ကို download လုပ်ခွင့်ပြုသောလူကြိုက်များတဲ့ browser များများအတွက်အခမဲ့တိုးချဲ့မှု (plugin ကို) ဖြစ်ပါသည်။
AdBlock vs. AdBlock Plus အား: သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ Advertising ကြော်ငြာနှစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်အတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဝင်ငွေအများဆုံးထိရောက်သောနည်းလမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်သူမကနီးပါးတိုင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိစာမျက်နှာနှင့်အံ့ဩစရာမရှိအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အဲဒီမှာကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ဖို့ browser ကိုများအတွက်အထူး Add-ons တွေကိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အများကြီးအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကြ၏။
အတော်လေးမကြာခဏအသုံးပြုသူများအင်တာနက်ပေါ်ရှိဗီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သီချင်းနားထောင်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမိမိတို့၏အရည်အသွေးကိုအလိုရှိသောခံရဖို့သိပ်အရွက်လျက်ရှိသည်။ ဒီပွိုင့်ပြင်ပေးရန်သင့်အားအသံကဒ်ဒရိုင်ဘာညှိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက် setting ကိုတစ်ခုလုံးကို operating system ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်သည်။ အသံအရည်အသွေးကိုထိန်းညှိဖို့သာရုံကို browser အတွင်းပိုင်း, သင် extension ကိုသုံးနိုငျ, ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရွေးချယ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
VkOpt: လူမှုကွန်ယက် Vkontakte အသစ်အခွင့်အလမ်းများ
VkOpt - ဤသည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များကိုမဆိုအသုံးပြုသူအံ့သြသွားလိမ့်မယ်အရာ, လူမှုကွန်ယက် Vkontakte များအတွက် add-ons တွေကိုလူကြိုက်အများဆုံးဘရောက်ဇာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ထို program ကိုသငျသညျနားလညျနိုငျအဖြစ်, ဒီတိုးချဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်အဆုံးသတ်ကြဘူး, Vkontakte ကနေအသံနှင့်ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါဖို့ဒီဇိုင်း, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။
DownloadHelper: အ boot loader ၏ Browser-based ပြန်လည်သုံးသပ်
Daunload ကူညီ - Internet မှအသံနှင့်ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါရန်ထိရောက်သောအဖြည့်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့ extension ကို၏အကူအညီနှင့်အတူသင်ကသင့်ကွန်ပျူတာသို့ယခင်ကသာအွန်လိုင်း play နိုင်သည့်မည်သည့်မီဒီယာ, ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ Google Chrome နှင့် Mozilla Firefox ရဲ့ - DownloadHelper နှစ်ခုအဓိက browser များကထောက်ခံသည်။
Video Downloader Pro ကိုကနေဗီဒီယိုတွေကို Download
အင်တာနက်ကိုခုနှစ်တွင်စိတ်ဝင်စားဖို့အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုမရေမတွက်နိုင်သောအရေအတွက်, အမြင်ထုတ်ဝေသာအွန်လိုင်း mode မှာဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာမှနားထောင်ပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာမှဂီတသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကို download လုပ်လိုပါက, သင်သည်ဤတာဝန် Video Downloader Pro ကိုအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Video Downloader Pro ကို - ထိုသို့သော Vkontakte, Odnoklassniki, Vimeo နှင့်အခြားသောအဖြစ်ရေပန်းစားန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုမယ့်အသုံးဝင်တဲ့ browser ကို-based ဖြည့်စွက်သည်။
MusicSig: FaceBook site ကိုမှဘရောက်ဇာကို-based အဖြည့်
Music ကို Whitefish - အသုံးပြုမှု site ကို Vkontakte ၏လွယ်ကူခြင်းအဘို့အအထူးဒီဇိုင်းတစ်ဦးကို browser-based ဖြည့်စွက်။ ယင်း utility ကို၏သော့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်ခုမှာ - ဒီအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်အဆုံးသတ်မလူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက်ကနေဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်, ဒါပေမယ့်လည်းဖြည့်စွက်ရန်စွမ်းရည်။ MusicSig Mozilla Firefox ကို, Opera နဲ့ Google Chrome ကိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များ web browsers တွေထောက်ခံပါတယ်။
https://termotools.com my.termotools.com © Browser ကိုတိုးချဲ့ 2019